ICandelo loNyango loMthombo woMoya, uLawulo, iiCandelo eziLawulayo- iBlch Pneumatic
ICandelo loNyango loMthombo woMoya
Uthotho lwe-B / C
I-Solenoid Valve kunye neeValve zokuLawula umoya
Oomatshini Valve & Ezinye Ivaluva
Iisilinda zeTwin Rod kunye neTri-Rod
NeZilinganisi One Touch
Imibhobho yePu kunye noMipu woMoya
U uthotho FR.L indibaniselwano
Susa amanzi kunye ne-particle ngokufanelekileyo. I-40µm kunye ne-5µm yeefilitha zokucoca zinokutshintshiselana ngokulula kwaye zinokutshintshwa. Ukubeka uxinzelelo ngokuchanekileyo nangokulula. Ioyile yeLubricator inokuphinda igcwaliswe ngaphandle kokumisa unikezelo lomoya. Ukutshiza ioyile enkungwini kuqinisekisa ukuthambisa kakuhle koomatshini. I-anti-acid kunye nesitya se-alkali kunye nesitya sealuminium zibonelela ngokhuseleko olugqwesileyo kwimeko yokusebenza kwezinto eziphilayo. Ioyile yeLubricator (Kuyacetyiswa): ISO-VG32
F uthotho FR.L indibaniselwano
Uxinzelelo oluphezulu lokusebenza: 16bar, uxinzelelo oluphuma ngaphandle: ibha ye-12 inokugcwalisa ioyile kwisithambisi njengoko inkqubo ezizenzekelayo iqhubeka isebenza. Ukusebenza kohlengahlengiso loxinzelelo kuthembekile ngokuchaneka okuphezulu. Ukusebenza kokuphelisa ukufuma kunye neenkozo eziqinileyo kuphezulu.
Umdibaniso we-AFC-BFC FR.L
AC-BC series FRL indibaniselwano
Isihluzi somoya se-AFR-BFR
C uthotho Lubricator
Umlawuli womoya we-AR / BR
HSV series isilayidi Valve
I-ASC yeValve yoLawulo loPhuculo lweValve
I-RE Series Flow Valve yoLawulo
I-3H-4H uthotho lweValve yesandla
I-FV320-420 uthotho Ivaluva zeenyawo
CXSM20-50 Double Intonga Isilinda
Isilinda esisezantsi se-SC50-150
I-P80-CU uthotho lweNtaba yeSilinda yasimahla
Metal eyodwa kwebala izixhobo
Ividiyo ayibonakali, kunokwenzeka ukuba isikhangeli sakho asiyixhasi ividiyo ye-HTML5
# UMBUZOLINK #
IBlch Pneumatic Science and Technology Co Ltd yasekwa ngo-Agasti 2004, ibekwe kwindawo yokuphuhlisa uqoqosho ye-YueQING. Inkampani igubungela indawo ye-24000 ㎡, eneemveliso ezi-5 ezinabasebenzi abangaphezulu kwama-300. Lishishini elingengommandla eligxile kwi-R & D, imveliso, ukuthengisa kunye nokugcinwa kwenkonzo yamalungu omoya.
SIYAVULELA! I "Internal Pilot Isikhokelo Precision Pressure Ukunciphisa Valve" imigangatho leyo kwakhokelela yayilwa yinkampani yethu iye yamkelwa yi Zhejiang Product Quality Association njengoko R ...
IBlch Pneumatic Science and Technology Co Ltd yasekwa ngo-Agasti 2004, ibekwe kwindawo yokuphuhlisa uqoqosho ye-YueQING. Inkampani igubungela indawo engama-24000
Fumana uhlaziyo lwamva nje kunye nokunikezelwa ...
Hayi, 387, Jingba Road, Uphuhliso loQoqosho Zone, Yueqing, Zhejiang, China
© Copyright - 2010-2020: Onke amalungelo agciniwe. Uxhaso lobuchwepheshe:Ihlabathi jikelele Imveliso eshushu - Imephu yendawo